Apple Watch Series 4 kutakura kunoramba kuchiwedzera kunonoka | Ndinobva mac
Ichokwadi kuti vashandisi vekutanga kuchengetedza iyo nyowani Apple Watch Series 4 Vakawana mudziyo mumazuva ekutanga kana kunyangwe pazuva rekumisikidzwa, asi ikozvino kuwana imwe yeaya mawachi iri kuita odyssey chaiyo uye nguva dzekuendesa dzinoramba dzichiwedzera kunonoka pawebhusaiti yeApple.
Nguva dzekutumira dziri kutora kureba chaizvo izvozvi uye chero munhu anotenga imwe yeaya mawachi nhasi achafanira mirira kusvika Gumiguru 26 - Mbudzi 6 kuti iendeswe kwatiri. Kununurwa kwemamodheru matsva kunoramba kuchiwedzera kunonoka uye Apple yakatowedzera mumwe mugadziri kuti arambe achiburitsa mawachi ayo nekumhanya kuzere.
Apple Watch Nike + ichave iripo muna Gumiguru 5
Iyi ndeimwe yenyaya dzakakosha uye dzakatanhamara maererano neApple Watch Nike + mamodheru, uye ndezvekuti kambani yakanonoka kuvhurwa kweiyi kwemavhiki akati wandei saka vanotarisirwa kurovera muzvitoro muna Gumiguru. Zuva iri rinoratidza uye Apple haina zuva rakatarwa rekuburitswa kwayo asi vanogona kutarisirwa kusvika neChishanu ichocho. Kune rimwe divi, zvichave zvakakosha kuti uve nekukurumidza kana iwe uchida kutora iyo Nike + modhi, sezvo kudiwa kwemawachi aya kuchiri kukuru chose uye zvinokwanisika kuti isu tinopera iri wachi kana isu tisingamhanye.
Izvozvi iwe unogona kuwana mamwe akasununguka mamodheru mune yepamutemo Apple zvitoro yeNew Series 4, asi aya ari chaiwo mamodheru uye hapana yakakwana stock yekugona kusarudza iyo yatinoda zvakanyanya. Ngatitarisirei kuti munguva pfupi pfupi stock ichamisikidza zvishoma uye wachi inogona kusarudzwa pasina matambudziko akawanda kuisimudza kuApple Store, nekuti izvo zvinotumirwa kumba zvinoramba zvichiwedzera mazuva kunyangwe chiri chokwadi kuti zvinowanzoendeswa kutanga kwemazuva akaratidzirwa, asi ichiri nguva refu yekumirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch Series 4 kutumira kunoenderera kuunganidza kunonoka
Safari Technology Preview yakagadziridzwa kuita vhezheni 66